थाइराइड भनेको के हो ? यसबाट कसरी जो’गिने ? – Suchana Hub
थाइराइड भनेको के हो ? यसबाट कसरी जो’गिने ?
काठमाण्डौ । थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो जुन घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघ*ण्टीको तल रहेको हुन्छ । यस ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्दछ र थाइराइडको खास काम भनेको शरीरको गति नियन्त्रण (मेटाबोलिजम) गर्ने हो । थायराइड नोड्युल भनेको थायराइड ग्रन्थीको अ*सामान्य वृद्धि हुनु हो । थायराइड ग्रन्थी घाँटीमा पाइने गरिन्छ भने यो ग्रन्थी सा*स नली र ट्रेकियाको चारैतर्फ पुलतीको आकारमा टाँसिएको हुन्छ । नेपालमा पनि थायराइडका बिरामी दिनानुदिन बढ्दो रहेको छ। तर आखिर थाइराइड भनेको के हो त ?
थायराइड नोड्युलका लक्षणहरु : यसका लक्षण यस प्रकार रहेका छन् : – – सुरुवाती अ*वस्थामा खानेकुरा निल्नमा निकै समस्य हुने गर्दछ । यो सुन्निने भएकाले यसलाई सजिलै सँग पहिचान गर्न सकिन्छ । – कुनै अवस्थामा थायराइड नोड्युल अ*तिरिक्त मात्रामा थायराक्सिन हर्मोन निकाल्ने गर्दछ । – थायराइड नोड्युलका कारण अचानक तौल पनि घ*ट्नसक्छ । – यसले भोइस बक्स (लेरिंक्स)लाई सं*कुचित गर्ने हुँदा यसका कारण बोल्नमा पनि स*मस्या हुने गर्दछ । – थाइराइड नोड्युल बढ्दा राती सुत्नमा पनि स*मस्या हुन्छ । – यसका कारण मुटुको धड्कन पनि अ*नियमित हुने गर्दछ ।
– साथै मां*सपे*शी पनि क*मजोर हुने गर्दछ जसका कारण बिरामीलाई क*मजोर र थ*कान महसुस हुने गर्दछ । – अ*चानक धेरै मोटाउने वा दुब्लाउने – धेरै जाडो वा गर्मि महसुश हुने – मुटुको ध*ड्कन छिटो छिटो बढ्ने – क*ब्जियत हुने वा धेरै दिशा लाग्ने – म*हिनावा*रीमा ग*डब*ड हुने – घाटी सु8न्निने – काम गर्न गा*ह्रो वा अल्छी लाग्ने – कपाल धेरै झ*र्ने – छाला सुख्खा हुने तथा नङ भा*चिने – आँखा हेर्न अ*सजिलो हुने – भोक बढी लाग्ने तर जति खाँदा पनि दुब्लाउदै जाने – शरीरको ता*पक्रम बढ्ने – मन आ*त्तिने – मा*नसिक त*नाव बढ्द्दै जाने
के खाने ? कुनै पनि रोगको सम्भावना न्यू*न गर्न खानाले निकै ठुलो भूमिका खेल्दछ । थाइराइडको स*मस्या कम गर्न पनि खानाले धेरै मद्दत गर्छ । दैनिक खानामा ३०–३० प्रतिशत सलाद र उसिनेको खानेकुरा खाने । त्यस्तै ४० प्रतिशत नियमित खानाको अनुपात मिलाएर खाने हो भने थाइराइडको स*मस्या कम गर्न सकिन्छ । के नखाने ? सोयाबिन र यसबाट बन्ने खानेकुरा खानुहुँदैन । सोयाबिनको तेलले शरीरमा थाइराइड हर्मोनमा कमी ल्याउँछ भने सेतो आटाबाट बनेका पाउरोटी, ब्रेड, पिज्जा र बर्गर आदि ग्ल्युटिन तत्व भएका खानेकुरा पनि सकेसम्म खानुहुँदैन । त्यसै माथी औषधि से*वन गरिरहेका हरुले त ग्ल्युटिनयुक्त खानेकुरा खानै हुँदैन ।
Previous गर्मीमा मोही खानुको यति धेरै फाइदा